China Holdwin Automatic Sandblaster Cabinet Drum Sandblasting Machine Kuwedzera adhesion Pre-kupenda Surface kurapwa fekitori uye vanotengesa | Pakarepo Yakachena
Holdwin Automatic Sandblaster Cabinet Drum Sandblasting Machine Wedzera Kuomerera Pre-kupenda Surface kurapwa
Vhidhiyo technical technical
Zvivakwa zvekutengesa, Chigadzirwa Chekugadzira, Chikafu & Beverage Fekitori, Mabasa ekuvaka, Simba & Mining
Ngura Kubvisa Machine
Uwandu (Sets) 1 - 5 > 5
Zvakatipoteredza zvine hushamwari Drum mhando otomatiki jecha nenyunje muchina
Mamiriro: 1. Iyo inogona otomatiki kuputika jecha panguva uye jog yekumisikidza basa; 2. Basa-chidimbu chiri nyore kurodha uye kuburitsa, zviri nyore kushanda, uye kunochengetedza zviwanikwa zvevanhu; 3. Hukuru hwe roller uye pfuti inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi; 4. Inokodzera kugadzirwa kwemazhinji ezvidimbu-zvidimbu zvebasa, senge zipper misoro, screwdriver mabheti, drill bits, etc.5. Drum Kutakura Kurema: 15-20kg
Dhiramu inogona kuchinjika otomatiki, zvinoenderana neyakasiyana-siyana-kutenderera kutenderera kumhanya, uye yakarongedzwa neganda resilicone kudzivirira basa-chidimbu kubonderana nekukuvara, roller yacho inogona zvakare kugadziridzwa zvinoenderana nesaizi yebasa-chidimbu uye gomba; With otomatiki nenyunje, otomatiki kuridza, dusting nguva chiratidzo chakayambira, mira uye mamwe mabasa; Tora otomatiki vachisimudza pfuti furemu, pfapfaidzo pfuti inogona kusarudza 1-4 pfuti, pfuti pfapfaidzo ine chakasiyana kutonga, uye ine maviri mabasa echinyorwa uye otomatiki; Dutu rudzi rwekuparadzanisa, otomatiki kupora uye kudzokorodza jecha zvigadzirwa, otomatiki kupatsanurwa kwejecha uye guruva kudzikisa kudyiwa kwejecha zvinhu, zviri nyore kudzora uchishandisa jecha tsanga saizi
Muchina une maviri anoshanda modes: manyore uye otomatiki
Aya akateedzana emamodheru anogona kugadzirwa ne3-4 pfuti kune asiri-akajairwa mamodheru
Zvinoshanda abrasives: shava corundum, corundum, girazi marozari, nezvimwewo .; kana yakamanikidzwa, mabrasives esimbi simbi simbi uye piritsi yesimbi inogona kushandiswa.
Zvishandiso: Inokodzera batch kugadziriswa kwenhamba hombe yezvidiki-zvidimbu zvebasa. Semuyenzaniso: Bake-lite zvigadzirwa, sikuruu nzungu, chibooreso mabheti, waya matepi, batch misoro, zipi misoro, nhare mbozha, acrylic, epurasitiki zvigadzirwa, mhangura, aluminium uye zvimwe zvigadzirwa.
deburring maturusi esimbi
Holdwin Yakakwira Pressure Sandblasting Machine Yakaomarara ...
Makorari Media Surface Kupedza resin Media
Manual Sandblast muchina pamwe Sefa guruva colle ...